Hetsika sosialim-bahoaka :: Hatomboka amin'ireo fokontany nahavita lisitra ny fizaràna vatsy tsinjo • AoRaha
Hetsika sosialim-bahoaka Hatomboka amin’ireo fokontany nahavita lisitra ny fizaràna vatsy tsinjo
Hiverina manomboka anio ny fizaràna vatsy tsinjo ao anatin’ny hetsika sosialimbahoaka tanterahin’ny fitondram-panjakana, rehefa niato nandritra ny dimy andro. Hotsinjaraina isam-pokontany izany mba hialana amin’ny fitangoronana amina toerana iray ka nanjary niteraka savorovoro teo aloha.
Nomarihin’ny minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina sady mpitondra tenin’ny governemanta, Andriatongarivo Lalatiana anefa fa : « ireo fokontany efa nahavita ny lisitr’ireo tokantrano hisitraka ny fanampiana no hanomboka avy hatrany ny fizaràna ».
« Misy ireo izay mbola eo am-pamolavolana an’io lisitra narafitra miainga amin’ ny firaketana an-tsoratra nataon’ny minisitera ka miandry kely », hoy izy. Handeha miandalana, araka izany, ny fitsinjarana an’ireto fanampiana avy amin’ny fitondram-panjakana ireto. Miankina amin’ny fahavitan’ny lisitra ofisialy isampokontany ny fanohizana an’izany, ka handeha manaraka ny laharan’ireo tokantrano nanaovana ny firaketana an-tsoratra ny fiantsoana ny isam-pianakaviana omena ny fanampiana.
Ho fitandremana amin’ny voalaza fa mety hisian’ny fikorontanana amin’izao fizaràna ny vatsy tsinjo andiany faharoa izao dia nisafidy ny tsy hanambara ny antsipiriany mikasika ny fomba hizaràna ny fanampiana ny governoran’Analamanga, Rasoamaromaka Hery. « Toky no homeko ny vahoaka fa milamina io. Aleo tazomina ny paik’ady hanatanterahana azy mba tsy hisian’ny mpanararaotra mety hanakorontana. Ho hitanareo eo ihany ny fizotrany », hoy fotsiny izy, omaly.
Ho an’ny teny amin’ny kaominina Bemasoandro Itaosy, omaly, dia « ireo efa nahazo ny tapakila nandritra ny fanombohana tamin’ny fomba ofisialy no nomena » fa mbola tsy tafiditra ao anatin’ilay fiverenan’ny fizaràna izany.
Tokantrano an’hetsiny no tokony hahazo ny Vatsy tsinjo. Isan’ny maro indrindra tamin’ izany ny eto amin’ny kaominina Antananarivo renivohitra. Tsy latsaky ny tokantrano roa alina tamin’ireo faritra samihafa teto Analamanga niandraiketan’ireo minisitra tsirairay nanao ny firaketana an-tsoratra no tokony hahazo ny fanampiana. « Ny eto Antananarivo renivohitra fotsiny no efa maherin’ny iray hetsy», hoy ny loharanom-baovao iray avy etsy amin’ny Lapan’ny tanàna etsy Analakely.
Fanavaozana mpitantana Hosoloina ny talen’ ny Ivon-toeran’ny sarimihetsika malagasy
Fifidianana loholona Manomboka mifantina an’ireo kandidany ny IRD
Fiarovana ny fiarahamonina Nanatitra adala enina teny Anjanamasina ny CUA
Raharaham-pirenena • Tapatapany
Fahasahiranan’ny orinasa tsy miankina :: Olona iray hetsy nampiatoana tampoka tamin’ny asany
Dinika politika savaranonando :: Nakan’ny Vondrona Eoropeana hevitra ny sehatra tsy miankina
Fanenjehana voafonja Depiote teo aloha voasambotra teny Analakely
Famonjena olona hafa kely Lehilahy marary saina nampidinina teny amin’ny andrin-jiro
Lozam-pifamoivoizana Maty tsy tra-drano ilay mpitondra môtô nidona tamin’ny taksibe
Vono olona tsy niniana natao Vehivavy maty voatifitry ny zandary
Jiolahy raindahiny Notsatohany lefona ny vadiny bevohoka